Google Play Services dia mahatratra 9.8 miaraka amina endri-javatra vaovao | Androidsis
Google Play Services dia iray amin'ireo fampiharana azonay lazaina fa mandeha any aoriana ary marina izany ny fototra hahafahantsika mampiasa ireo fampiharana rehetra ireo sy serivisy mahazatra antsika isan'andro amin'ny finday avo lenta.
Izao dia rehefa nahazo fanavaozana lehibe kokoa noho ny i Google Play Services manampy endri-javatra maro ary ny fanatsarana izay tokony ho fanampiana lehibe ho an'ireo mpamorona sy mpampiasa Android. Tao anatin'ireny vaovao rehetra ireny dia nanapa-kevitra i Google fa tsy hanaiky ny fampandrenesana akaiky azy noho ny olana iray izay tsy azon'izy ireo angonina ara-potoana.
Ary ilay G lehibe tenany ihany no namoaka lisitra fanovana somary betsaka izay mampiseho ireo fanovana lehibe rehetra nampidirina tao amin'ny Google Play Services ao amin'ny kinova 9.8. Mikasika ny fampandrenesana eo akaiky eo, mety ho an'ny fanavaozana manaraka dia hahetsika.
Anisan'ireo zava-baovao rehetra ireo, angamba ny tena manintona ny saina indrindra dia ny fahaizan'ny mpampiasa izao fenoy ireo nomeraon-telefaona mifandraika amin'izany miaraka amin'ny kaontinao amin'ny alàlan'ny tsindry tsotra amin'ireo fampiharana izay mampiasa ny API fanamarinana.
Google Fit, ny fampiharana ho an'ny fanatanjahan-tena sy ny fahasalamana, izao dia manana API vaovao, Tanjona, izay mamela ny fampiharana Tanjona "Fitness" noforonin'ireo mpampiasa avy amin'ny fampiharana ho an'ny fitaovana Android. Ary, na dia kilemaina vonjimaika aza ny Filazana akaiky, dia nohatsaraina tamin'ny safidy vaovao ao amin'ny interface, ary koa ny fanohanana ny hetsika tsy misy tanana.
Ary farany, sisa tavela amin'ny Cast API isika izay nohatsaraina tamin'ny endrika vaovao sy fanatsarana, toy ny nitranga tamin'i Firebase. Tsy azontsika hadino koa fa mitondra miaraka amin'ity fanavaozana vaovao ity manamboatra bug ary fanovana sasantsasany izay hanatsara ny fahombiazan'ity serivisy ity izay tazonina any aoriana any amin'ny fotoana marobe mba handeha tsara ny zava-drehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Google Play Services dia nohavaozina miaraka amina endri-javatra vaovao sy fanatsarana vaovao
Xiaomi Mi Note 2, ny tena sary dia voasivana ora maromaro alohan'ny fampisehoana azy